Ny Galaxy Watch Active 2 dia havoaka aloha any amin'ny firenena sasany | Androidsis
Tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Watch Active 2, ny famantaranandro vaovao an'ny marika koreanina. Taorinan'ny vokatra tsara amin'ity taranaka voalohany ity dia tsy te-handany fotoana i Samsung ary avelany miaraka amina maodely iray izay nampidirina andiana fanatsarana teo amin'ny lafiny asa.
Ity famantaranandro ity dia antenaina fa ho tonga amin'ny faran'ny volana septambra any Etazonia sy Korea atsimo, saingy toa azo nandrosoana ny fandefasana azy. Araka ny Samsung dia afaka nanangana azy teo aloha teo amin'ny tsena roa. Ka ity Galaxy Watch Active 2 ity dia mety ho tonga telo herinandro mialoha ny fandaharam-potoana.
Toa ny famoahana ity famantaranandro ity any Korea amin'ny fiandohan'ity volana ity, 6 septambra ho voafaritra. Ho fanampin'izay, efa voalaza ao amin'ny haino aman-jery maro fa amin'ny daty io ihany dia hamidy any Etazonia izy io, raha ny drafitra voalohany dia ny hamoahana ny Galaxy Watch Active 2 amin'ny 27 septambra, araka ny voalaza tao amin'ny famelabelarana.
Na eo aza ireo tsaho ireo, tsy misy fanamafisana ofisialy ataon'ny orinasa Koreana hatreto. Na dia mihabetsaka aza ny haino aman-jery miresaka momba ity fahafaha-mandroso ity. Na dia i Etazonia sy Korea Atsimo ihany aza no voalaza ao amin'ny tatitra rehetra.
Ny tena izy dia ny Galaxy Watch Active 2 mbola tsy manana daty famotsorana any Eropa. Tsy nisy na inona na inona voalaza tao amin'ny famelabelarany, ary efa ho iray volana taty aoriana dia mbola tsy manana antsipiriany momba an'io izahay. Na dia tsy tokony haharitra ela loatra aza, raha ato anatin'ireto herinandro ireto dia efa natomboka tany Etazonia sy Korea.
Noho izany, manantena izahay fa tsy ho ela ny Samsung dia hanamafy zavatra sJereo hoe rahoviana no ho tonga eny an-tsena ity smartwatch vaovao avy amin'ny orinasa ity. Aorian'ny varotra tsara an'ny taranaka voalohany dia misy fahalianana betsaka amin'ity famantaranandro vaovao avy amin'ny marika ity. Mitombo hatrany ny varotra azo anaovana ny marika ary izy izao no faharoa amin'ireo volana ireo, vokatra tsara ho an'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Watch Active 2 dia ho tonga aloha kokoa amin'ny tsena sasany
Ireo no sary namboarina tamin'ny Sony Xperia 2 izay manambara sy manamafy ny fisehoany
Navoaka ny famaritana Motorola One Zoom